Xildhibaanada Baarlamaanka Puntland oo La Dhaariyay Doortayna Guddoomiye KMG.
Tuesday January 01, 2019 - 13:09:56 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Xubnaha cusub Baarlamaanka Maamul Goboleedka Puntland ayaa maxkamada sare ku dhaarisay xarunta golaha wakiilada, kadib markii shalay lagu dhowaaqay liiska xildhibaanada cusub.
Dhaarinta kadib ayaa mudanayaasha Baarlamaanka Puntland waxaa la siiyay aqoonsigooda. Goobta lagu dhaariyay ayaa waxaa ku sugnaa qaar ka mid ah waxgaradka maamulka Puntland,iyo siyaasiyiin kale.
Xildhibaanada Baarlamaanka Puntland ayaa lagu wadaa in 3da bishan Janaayo ay doortaan Guddoonka Baarlamaanka.
Dhanka kale xildhibaanada ayaa doortay guddoomiye KMG ah u doortay Xildhibaan Xuseen Xaaji Yaasiin oo ah qofka ugu da’da weyn ee kujira baarlamaanka,ilaa laga soo dooranayo guddoomiyaha baarlamaanka ee rasmiga ah.
Xildhibaanadan cusub ee Maanta la dhaariyay ayaa maalmaha soo socda waxa ay soo dooran doonaan Guddoomiyaha cusub ee Baarlamaanka Maamulka Puntland,kadibna waxa dooran doonaan Madaxweynaha cusub ee Puntland hogaamin doona 5 sano ee soo socota.
Ololaha doorashada Madaxweynaha iyo Madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa si xowli ah u bilaabatay xalay kadib markii lagu dhowaaqay magacyada Xildhibaanada kuwaasoo isugu jira kuwo hore iyo kuwo cusub.
24/06/2019 - 10:28:45